NYI LYNN SECK 18+ DEN: May 2010
Posted by NLS at 5/26/2010 09:35:00 PM 73 comments Links to this post
Posted by NLS at 5/25/2010 03:24:00 AM5comments Links to this post
Posted by NLS at 5/22/2010 09:02:00 AM 46 comments Links to this post
ထူးခြားအေးမြသည့် လ၏ ပုံရိပ်လွှာ ဆိုပဲ
၁၇.၀၅.၂၀၁၀ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းလေး တစ်ခုပာ။
ထူးခြားအေးမြသည့် လ၏ ပုံရိပ်လွှာ
အာကာသ၌ နေ၊ ကမဿဘာ၊ အရံဂြိုဟ်လနှင့် ကြယ်တာရာများ ဖြစ်ထွန်း တည်ရှိလျက်ရှိရာ ဂြိုဟ်တာရာ တစ်ခုချင်းအလိုက် ကိုယ်ပိုင် ဂုဏ်သတဿတိများ ရှိကြရာဝယ် နေဂြိုဟ်သည် အလင်းရောင်နှင့် အပူဓာတ်၊ အရံဂြိုဟ်လသည် အလင်းရောင်နှင့် အအေးဓာတ်တို့ ရှိသည့်အပြင် ကြယ်တာရာများကား အာကာသ ဓာတ်သဘောကို ထိန်းညှိပေးလျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေ ၁၆ရက် ည ၇ နာရီ ၁၉ မိနစ်က အာကာသ၌ အအေးဓာတ်ကို ဖြန့်ဝေပေးနေသည့် အရံဂြိုဟ်လအနီး အာကာသဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးသည့် ကြယ်တာရာတို့ နီးကပ်စွာ ဖြစ်ပှောခဲ့ရာ ကမဿဘာမြေအား အေးမြသော ဓာတ်ကို လွှမ်းခြုံ ထိန်းညှိ ဖြန့်ဝေပေးသည့် သဘောကို ထင်ဟပ်ဖှောညွှန်းလျက် ဤသို့ မြင်တွေ့ရသည်မှာ ...။ ဓာတ်ပုံ တင်စိုး (မြန်မာ့အလင်း)
အရမ်းအရမ်း သဘောကျလွန်းလို့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပာတယ်။ သတင်းစာတွေဆိုတာ သမိုင်းတွေပဲ မဟုတ်လား။ ဒာပေမယ့် ရေးထားတဲ့ စာသားတွေကို သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဘာတွေမှန်း မသိဘူး။ ဘယ်လိုကဘယ်လို ထိန်းညှိတယ် ဆိုတာလည်း မသိရဘူး။ ဘာကြယ်တာရာ ဆိုတာလည်း ပြောပြမထားဘူး။ ဆန်းစလ ကွေးကွေးလေးက ဘယ်လို အေးမြမှုတွေ ပေးသလဲ ဆိုတာလည်း နားမလည်နိုင်ပာဘူး။ ထားပာတော့။ ထားပာတော့။ တစ်ညလုံး ကျမ်းတွေဖတ်ပြီး တွက်ချက်ကြည့် ထားတာလေး တင်မလို့ရှိသေး ဒီဟာဖတ်ကြည့်ပြီး တင်ချင်စိတ် မရှိတော့လို့ မတင်တော့ပာဘူး။
ကြယ်တာရာတွေ အေးမြတာတွေ ထိန်းညှိတာတွေတော့ မသိဘူး။ ရွာတွေမှာတော့ ရေတွေပြတ် ရေတွေငတ်ပြီး လူတွေလည်း ဖလပ်ဖလပ် ဖြစ်နေကြပြီ။ မြစ်တွေချောင်းတွေလည်း ရေတွေ ခမ်းခြောက်ကုန်ပြီ။ မိုးလောက်လောက်လားလား ရွာမှ ဖြစ်တော့မယ်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာ လွန်တွေ ဆွဲနေကြတာလည်း ကြိုးတောင် ပြတ်တော့မယ် ထင်ပ။ ဒာတောင် အရင်မိုးဇလက ဦးထွန်းလွင်ကြီးက မိုးလာတာ နောက်ကျမယ်ပြောထားတာ ဒီနေ့ မိုးနဲနဲ ရွာလိုက်တော့ ဘယ်လို ဆက်နားလည်ရမှန်း မသိတော့ ပြန်ဘူး။ ကိုယ်က Technology ကို သူတို့ထက် ယုံသေးတယ်။ Google Earth မှာ မြန်မာပြည်ဘက် တိမ်တိုက်ကြီး မြင်လိုက်ကတည်းက ရွာတော့မယ်ဆိုတာ တွက်မိပာတယ်၊ MSN Weather ကလည်း ဒီနေ့ မိုးရွာမယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ပေး ထားပြီးသား။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ။
ရေးချင်ရာတွေ လျှောက်ရေးနေတာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးမို့ မှတ်တမ်းတင်တာပာ။ မြန်မာသကဿကရာဇ် ၁၃၇၂ နယုန်လဆန်း ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ခွဲလောက်မှာ ဗီးနပ်စ် လို့ခှောတဲ့ သောကြာဂြိုဟ်ဟာ လကို တည့်တည့် ဖြတ်သွားပာတယ်။ ည ခုနစ်နာရီ တိတိမှာ တစ်ဖက်ကနေ ပြန်ထွက်ပာတယ်။ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ မြန်မာ ရိုက်ခတ်မှု ရှိနိုင်သည်။ မြန်မာအများဆုံး။ မဟာတိတ်ထုံအရ ပြည်ပျက်ကိန်းတော့ မဟုတ်ပာ။ သို့သှောလည်း...။
Posted by NLS at 5/17/2010 11:26:00 PM 21 comments Links to this post
Labels: Fun, Interesting, Rare
National Democratic Force: Member Profile Data
NLD (National League of Democracy) အဖွဲ့ချုပ်ကနေ ခွဲထွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ အောက်က ပုဂဿဂိုလ်တွေကို NLD က ထုတ်ပစ်လိုက်တာ တွေ့ရပာတယ်။ အပြီးအပိုင် ထုတ်ပစ်တာလား ဒာမှမဟုတ် အရင်ကတွေလို ထုတ်ပြီးရင် ပြန်သွင်းလို့ (သို့) ပြန်ဝင်လို့ ရသေးလား ဆိုတာတွေတော့ မသိပာဘူး။ ဒီပုဂဿဂိုလ်တွေက NLD ကနေ ခွဲထွက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (National Democratic Force) အမည်နဲ့ ပာတီအသစ် ထောင်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒာတွေက ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကောင်းသည် ဆိုးသည် မသုံးသပ် တတ်ပာဘူး။ ဘယ်ပာတီက ဘယ်သူတွေ ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်လိုကောင်းတယ် ဘယ်လို သမိုင်းနောက်ခံ ရှိတယ် ဆိုတာတွေကိုသာ ကျွန်တှော့ အနေနဲ့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမိပာတယ်။ ကျွန်တှောက အတဿထုပဿပတဿတိသမားမို့ ရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ သဘောပာ။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှာရတာဟာ အတှောကို ခက်ခဲပြီး ရှားပားပာတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရဖို့လည်း မလွယ်လှပာဘူး။၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြမယ့် သူတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှာဖွေပြီး တွေ့ရသလောက် တင်သွားပေးမယ်လို့ ရည်ရွယ် ထားပာတယ်။ လောလောဆယ် ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ NDF ကလူတွေနဲ့ပဲ စလိုက်ပာမယ်။ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်း သိဖို့တော့ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်မိပာတယ်။
(ဤဘလော့မှ စာများ၊ ဓာတ်ပုံများကို ဂျာနယ်၊ မဂဿဂဇင်း၊ သတင်းလွှာ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဘလော့ များတွင် ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ကူးယူ ဖှောပြခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ တားမြစ်သည်။ တဆက်တည်း သကြဿငန်တုန်းက ဓာတ်ပုံများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိ ကူးယူပြီး ဖှောပြခဲ့ကြသူများ၊ နာမည် အမျိုးမျိုး ပြောင်းတပ်ပြီး လုပ်စားခဲ့ကြသူများ အားလုံးကို ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချသည်။ ထိုသူများ မည်သည့် အခာတွင်မှ လာရောက် ဆက်ဆံရန် မလိုအပ်ပာ)
NLD မှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သူများ စာရင်း (သို့) National Democratic Force
မဲ ၇၆.၆၄% နိုင်
မှတ်ချက်။ အချက်အလက်များမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းအရ ဖြစ်သည်။
၂၆-၁၂-၁၉၄၄ (၁၃၀၆ ပြာသိုလဆန်း ၁၃)
မဲ ၇၁.၈၃% နိုင်
ခနောင်ရွာ၊ ကျောက်တန်း ဇာတိ
မဲ ၆၄.၉၅% နိုင်
မှတ်ချက်။ အချက်အလက်များမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းအရ ဖြစ်သည်။ ဒောက်တာသန်းငြိမ်းမှာ ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် မိန်းမ ဒှောခင်ဝင်းရွှေ၏ အကိုအကြီးဆုံးလို့ သိရပာတယ်။ (Credit: Ashley)
မဲ ၆၆.၄၆% နိုင်
မဲ ၆၇.၁၄% နိုင်
မဲ ၆၂.၈၂% နိုင်
ဦးဘိုးဘ + ?
မဲ ၇၁.၀၅ နိုင်
မဲ ၈၄.၈၈% နိုင်
မှတ်ချက်။ အချက်အလက်များမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းအရ ဖြစ်သည်။ ထုတ်ပယ်စာရင်းတွင် ဦးကြီးမြင့်ဟု တွေ့ရသှောလည်း လသာမဲဆနဿဒနယ်မှ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးကြည်မြင့် ဟုသာ တွေ့ရသဖြင့် ဦးကြည်မြင့် ဟူ၍သာ နာမည်ကို ယူထားပာသည်။
မဲ ၈၇.၁၆% နိုင်
မှတ်ချက်။ အချက်အလက်များမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်းအရ ဖြစ်သည်။ ထုတ်ပယ်စာရင်းတွင် ဦးတိုးဖိုဟု တွေ့ရသှောလည်း ရေဖြူမဲဆနဿဒနယ်မှ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးတိုးပို ဟုသာ တွေ့ရသဖြင့် ဦးတိုးပို ဟူ၍သာ နာမည်ကို ယူထားပာသည်။
မနဿတလေးအနောက်မြောက် (၁) မဲဆနဿဒနယ်
မဲ ၈၀.၃၈% နိုင်
ဦးမြင့်ငွေ (ရေနံချောင်း) နှင့် ဦးမျိုးဇှောအောင် တို့ နှစ်ဦးအကြောင်း မှတ်တမ်း မတွေ့ရသေးပာ။ ပာတီအသီးသီးမှာ ပာမယ့်သူတွေ စာရင်းကို သိရရင် ဒီထက်ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖှောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပာတယ်။
Posted by NLS at 5/17/2010 03:26:00 PM7comments Links to this post
Labels: Biography, Politic
I call the process by which the herd helps to build the foundation stones of democracy "revolution from beyond," or "Globalution." I first discovered globalution in Indonesia duringavisit in 1997, in the waning months of the Suharto era. I was having dinner with Wimar Witoelar,apopular Jakarta talk-show host, who was describing for me the young generation of the Indonesian middle class. He remarked that what many of these educated twenty- and thirty-year-olds had in common was that they wanted to get rich, without having to be corrupt, and they wanted democracy, but they didn't want to go in the streets and fight for it. This generation of Indonesians understood that under Suharto there would never beademocratic revolution from above, but they were terrified of democratic revolution from below, because if the urban poor revolted it would be the year of living dangerously all over again. So their whole strategy was revolution from beyond, or globalution. Their whole strategy was to do everything they could, sometimes consciously, sometimes unconsciously, to integrate Indonesia into the global system. They hoped that by tying Indonesia into these global institutions and markets - whether it was to the World Trade Organization, Pizza Hut, APEC, ASEAN, Merrill Lynch, PricewaterhouseCoopers or human rights nongovernmental organizations (NGOs) - they might be able to import from beyond the standards and rules-based systems that they knew would never be initiated from above and could never be generated from below.
ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အုတ်မြစ်တို့ကို ချပေးရာ၌ အီလက်ထရွန်းနစ်အုပ်က အကူအညီ ပေးခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ကို အဝေးအလွန်မှ တှောလှန်ရေး (သို့) ဂလိုဘာလူးရှင်းဟု ကျွန်တှောက ခှောပာသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အလည်အပတ် ခရီးတွင် ဂလိုဘာလူးရှင်းကို ဆူဟာတို နေဝင်ချိန် အင်ဒိုနီးရှာ၌ ကျွန်တှော ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရှာဖွေ တွေ့ရှိလိုက်သည်။ ကျွန်တှောက ဂျာကာတာ ရုပ်မြင်သံကြား ပှောပြူလာ စကားပြောခန်း ပြောသူ ဝီမာဝီတိုလာနှင့် ညစာ စားနေစဉ် သူက အင်ဒိုနီးရှား လူလတ်တန်းစား၏ လူငယ် မျိုးဆက်သစ်တို့ အကြောင်းကို သရုပ်ဖှော ပြောသည်။ အသက် ၂၀ နှင့် အသက် ၃၀ ကြား အင်ဒိုနီးရှား ပညာတတ် လူငယ်တို့၌ တူညီသော အချက်တစ်ချက် ရှိကြောင်း၊ ၎င်းမှာ သူတို့သည် စာရိတဿတ မပျက်ပြားဘဲ သူဌေး ဖြစ်ချင်ကြကြောင်း၊ သူတို့ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ကြောင်း၊ သို့သှော သူတို့ လမ်းပှောထွက်ပြီး ဤအတွက် မတိုက်ခိုက်လိုကြောင်း ပြောသည်။ သူက ဆက်လက်ပြီး ဤအင်ဒိုနီးရှား မျိုးဆက်သစ်က ဆူဟာတိုလက်ထက်၌ ထိပ်ပိုင်းမှစသော ဒီမိုကရေစီ တှောလှန်ရေးဆိုတာ ဘယ်သောအခာ ဖြစ်ပှောမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သှော မျိုးဆက်သစ်တို့က အောက်ခြေစ အီမိုကရေစီ တှောလှန်ရေး ကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ကြောင်း၊ ဘာ့ကြောင့်လည်း ဆိုတော့ မြို့နေ ဆင်းရဲသားလူထု ပုန်ကန် ထကြွလျှင် အလွန် အနဿတရာယ်ကြီးစွာ နေရသည့် ဘဝကို ပြန်လည် ရောက်သွားသည့်နှစ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့ကြောင့် သူတို့၏ မဟာဗျူဟာသည် အဝေးအလွန်မှ တှောလှန်ရေး ဂလိုဘာလူးရှင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့၏ မဟာဗျူဟာ တစ်ခုလုံးက အင်ဒိုနီးရှားကို ဂလိုဘယ်စနစ်ထဲ စုစည်း ရောက်ရှိသွားရေးကို သူတို့ တတ်နိုင်သမျှ တစ်ခာတစ်ရံ အသိရှိရှိနှင့်၊ တစ်ခာတစ်ရံလည်း မသိလိုက်ဘဲနှင့် အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားကို ဂလိုဘယ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဈေးကွက်တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ချည်နှောင် ပေးခြင်းအားဖြင့် ကမဿဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ဖြစ်စေ၊ ပီဇာဟတ်၊ အေပက်၊ အာဆီယံ၊ မာရီလင့်ခ်ျနှင့် ဖြစ်စေ၊ ပရိုက်စ်ဝားတား ဟောက်စ်ကူးပား နှင့်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော လူ့အခွင့်အရေး အစုအဖွဲ့ NGO တို့ နှင့်ဖြစ်စေ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မိခြင်း အားဖြင့် ထိပ်ပိုင်းမှ စတင် ကြိုးပမ်းလိမ့်မည် မဟုတ်သော၊ အောက်ခြေက ဘယ်လိုမှ မမွေးထုတ်နိုင်သော စည်းမျဉ်းအခြေခံ စနစ်တို့ကို အဝေးအလွန်မှသာ တင်သွင်းနိုင်ဖွယ် ရှိမည်ဟု သူတို့က မျှောလင့်ကြသည်။
Posted by NLS at 5/16/2010 01:04:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Politic, Thought
Alphabetum Barmanum: The First Burmese Printed Alphabets
Alphabetum Barmanum seu Bomanum Regni Avae Finitimarumque Regionum
ဒီစာအုပ်ဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိရင်တောင် သုံးလေးငားအုပ်ထက် မပိုနိုင်ဘူး။ စာအုပ်ဟောင်း ရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ အဆိုအရ ဒီစာအုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးက ဆယ်သိန်း အထက်မှာ ရှိပာတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို တစ်ခာမှ မမြင်ဖူးခဲ့ပာဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ တနေ့က ဆရာတစ်ယောက်က ပထမဆုံး မြန်မာ အကဿခရာတွေကို ပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်အကြောင်းကို သိချင်လို့ဆိုပြီး အကူအညီ တောင်းလာတယ်။ သူက ဂျဒ်ဆင်ရဲ့ အဘိဓာန်ကို ပထမဆုံးလို့ ထင်နေတယ်။ ဂျဒ်ဆင်က ပထမဆုံး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်။ အဲဒီအကြောင်း ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒာပေမယ့် ဘယ်စာအုပ်မှာလဲဆိုတာ အတိအကျကို မေ့နေတာမို့ စာအုပ်စင်ကို ပြန်လှန်ရပာတယ်။
ပထမဆုံး ခြေရာပြန်ခံမိတာက ဦးသန်းထိုက် (သုတေသန) ရဲ့ ရည်ညွှန်းလုပ်ငန်းနှင့် ရည်ညွှန်း အထောက်အထားများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာပာ။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဒီစာအုပ်အကြောင်း အရိပ်အမြွက် ပာတယ်။ ဒာပေမယ့် ပထမဆုံးပာလို့ အတိအကျ ဆိုမထားဘူး။ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေတာက ၁၇၇၆ ခုနှစ် ဆိုတော့ ဟုတ်တာတော့ ဟုတ်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ဒာနဲ့ ဟိုး ၁၉၇၃ လောက်က စာပေဗိမာန်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်စာပေ သုံးတွဲမှာများ ပာများပာမလားဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကွက်တိကို တွေ့တာပာပဲ။
ဟုတ်ပာတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာ မြန်မာ့ ပုံနှိပ်စာပေသမိုင်းမှာ ပထမဆုံး မြန်မာစာလုံးတွေ အဖြစ် ပုံနှိပ်ဖှောပြခြင်း ခံရတဲ့ မြန်မာသင်ပုန်းကြီး စာအုပ်ပဲ ဖြစ်ပာတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ၁၇၇၆ ခုနှစ်မှာ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့မှာ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတှောကြီး မယ်ချီယာ ကာပာနီ (Melchior Carpani) က ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့တာလို့ ဆိုပာတယ်။ အခုဆို ဒီစာအုပ် သက်တမ်းက ၂၃၄ နှစ်တောင် ရှိနေပာပြီ။
အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို တိတိကျကျ သိလိုက်ရလို့ အတှော ဝမ်းသာသွားပြီး လာမေးတဲ့ ဆရာကို အဲဒီအကြောင်း လှမ်းပြောမလို့ အင်တာနက် တက်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တှော့လက်က ဂူဂယ်မှာ အဲဒီနာမည် ရိုက်ထည့် လိုက်မိတယ်။ တွေ့လိမ့်မယ်လို့ သိပ်ပြီး ထင်မှတ်မထားပေမယ့် ဂူဂယ်ဟာ စာကြည့်တိုက်ကြီးတွေက ဒီလို အဖိုးတန် စာအုပ်တွေကို Digitize လုပ်ထားတတ်တာ ကျွန်တှော သိတယ်။ Search Result တွေထဲက Google Book ထဲမှာ ဒီစာအုပ်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်တှော အရမ်း ပျှောသွားမိတယ်။ အဖုံးလေးလောက်တော့ တွေ့ရကောင်းရဲ့လို့ တွေးမိပြီး အဲဒီလင့်ကို သွားကြည့်လိုက်တော့ ဒောင်းလုဒ်ပာ ပေးထားတာ တွေ့လိုက်ရတာမို့ ချက်ချင်းကို ဒောင်းလုဒ်ချပြီး ဖတ်ကြည့်မိပာတော့တယ်။
အခုခေတ်နဲ့ မတူတဲ့ ၁၇၇၆ ခုနှစ်က မြန်မာ အရေးအသား။ အခုခေတ်မှာ မရှိတော့တဲ့ ဝသတ်၊ ဈမျဉ်းဆွဲ ပုံစံထူး၊ အသတ်ပုံစံကွဲ နှစ်မျိုး၊ ဒီဘက်ခေတ် ဣ နဲ့ ဤ ကို ဘယ်လို ရေးထားမှန်း မသိတဲ့ အရေးအသား စတဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပာတယ်။ စာအုပ် နောက်ဆုံးမှာတော့ ခရစ်ယာန် သမဿမာကျမ်းစာထဲက ပညတ်တှော ဆယ်ပားနဲ့ ဆုတောင်းခန်း အချို့ကို ရေးထားတာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပာတယ်။ ဒာပေမယ့် အဲဒီအထဲက မြန်မာအကဿခရာတွေ အကြောင်းကို အဓိပဿပာယ် ဖွင့်ထားတဲ့ လက်တင် ဘာသာစကား စာတွေကိုတော့ နားမလည်တာမို့ မချင့်မရဲ ဖြစ်ရပြန်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တှော့ အတွက်တော့ အလွန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရလိုက်တာပာပဲ။
Download: Alphabetum Barmanum | Pdf | 4.5 Mb | Google Books
ရည်ညွှန်းလုပ်ငန်းနှင့် ရည်ညွှန်းအထောက်အထားများ၊ ဦးသန်းထိုက် (သုတေသန)၊ ရှေ့ရပ်စာပေ၊ ၂၀၀၈၊ စာ ၁၀၁
ပုံနှိပ်စာပေသမိုင်း၊ ရန်အောင်၊ စာအုပ်စာပေ (တတွဲ)၊ စာပေဗိမာန်၊ ၁၉၇၃၊ စာ ၈၀၇
Sorry if you feel any Inconvienience while reading! I only can access and post via email and so I cant justify the text :(
Posted by NLS at 5/14/2010 02:13:00 AM 10 comments Links to this post
Labels: Book Review, Download, Rare, Selection
မင်းမျက်ဝန်းတွေထဲက ဝမ်းနည်းမှုတွေအကြောင်း ပြောမပြချင်ဘူးလား
ငာမင်းကို နှုတ်ဆက်စကား မဆိုချင်ဘူး
အချစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ငာမေ့ဖို့ ကြိုးစားပစ်သင့်တဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး ပဥဿစလက် တစ်ခုပာပဲ
ဒာပေမယ့် ငာ့ခောင်းထဲမှာ တစ်ခုကတော့ စွဲထင် ကျန်ရစ်နေခဲ့ပြီ
ဒီဇာတ်လမ်းကို မင်းပဲ စခဲ့ပြီး အခုကျမှ မင်းပဲ အဆုံးသတ်ချင်ခဲ့တာ
တကယ်တမ်း နာကျင်ခဲ့ရတာက ငာတစ်ယောက်တည်း
အခုတော့ မင်းပြောခဲ့သမျှ အရာအားလုံးကို မင်းငာ့ကို မေ့စေချင်နေပြီလေ
မင်းရဲ့ အနမ်းတွေကို ငာဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်ဘူး
ဒာပေမယ့် ငာဟာ မင်းနှလုံးသားက တမ်းတနေသူ မဟုတ်ခဲ့ပာဘူး
ဒာကြောင့် မင်းငာ့ကို ထားရစ်ခဲ့တာပဲလို့ ငာသိလိုက်တယ်
ငာဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ ကြိုးစားခဲ့ မင်းအလိုမကျခဲ့ဘူး
မင်း အခု ငာ့ကို နှုတ်ဆက်စကား ဆိုချင်ပြီ
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ငာမေ့ပစ်လိုက်သင့်တဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး ပဉဿစလက် တစ်ခုပဲ
There aint't so much for me anymore
ဒွဟလမ်းဆုံတစ်ခုမှာ ငာတစ်ယောက်ထဲ ထိုင်နေမိတယ်
ဘယ်ကို ဆက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတာ ငာမသိဘူး
မင်းနဲ့ငာကြားမှာ ပြောစရာတွေလည်း သိပ်မရှိတော့တဲ့အခာ
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ ဂစ်တာတီးနေရင်း MLTR ရဲ့ သီချင်းဟောင်းလေး ပြန်တွေ့တော့ အစအဆုံး ပြန်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဟိုး ငယ်ငယ်တုန်းက ခံစားချက်နဲ့ မတူတဲ့ ခံစားချက်ကို ရတယ်။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့သီချင်းလေးက ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်လို ဖြစ်နေတယ်။ နူးညံ့သလို ခံစားရတယ်။ လေထဲမှာ ရုတ်တရက် ရလိုက်တဲ့ ရနံ့လေး တစ်ခုလိုပဲ။ လိုက်ဖမ်းတော့လည်း မရှိတော့ဘူး။
Posted by NLS at 5/13/2010 12:18:00 AM 8 comments Links to this post
Yatanarpon Portal Logo Competition
ရတနာပုံပေါ်တယ် (Yatanarpon Portal) သည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပြုလုပ်ရန် လျာထားသည့် National Web Portal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရတနာပုံပေါ်တယ်တွင် သတင်းကဏ္ဍ၊ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ၊ ဗဟုသုတကဏ္ဍ၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ရတနာပုံပေါ်တယ်၏ သင်္ကေတလိုဂို အဖြစ် အသုံးပြုရန် လိုဂိုပြိုင်ပွဲ တစ်ခုကို ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် လိုသူများသည် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆုရလိုဂိုအား Yatanarpon Portal၊ Yatanarpon Portal နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စာရွက် စာတမ်းများအတွက် တရားဝင်သုံးရန် ရည်ရွယ်သည်။
လိုဂို (၁) ခုမှ (၃) ခုအထိ ပေးပို့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသော လိုဂိုဖြစ်ရမည်။ အခြားနေရာများမှ မူပိုင်ဖြစ်သော လိုဂိုများကို ကူးယူသုံးစွဲခြင်းမရှိရပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသော လိုဂိုဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံချက်ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
လိုဂိုများကို တစ်ကြိမ်သာ ပေးပို့နိုင်သည်။ ပေးပို့ပြီးသော လိုဂိုများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုခြင်း၊ အခြားလိုဂိုတစ်ခုနှင့် ပြန်လည် အစားထိုးလိုခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။
ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပါက ဆုရလိုဂိုအား Yatanarpon Portal တွင် တရားဝင် အသုံးပြုရန် အပြီးအပိုင် လွှဲအပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လိုဂိုဒီဇိုင်း ရေးဆွဲသူမှ အခြားနေရာများတွင် မိမိစိတ်တိုင်းကျ သုံးစွဲခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။
လိုဂိုဒီဇိုင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော စံညွှန်များအတိုင်း ပြည့်မီအောင် ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် လိုဂိုများကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ (၃၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး ပေးပို့ရမည်။
ရွေးချယ်ခံရသော လိုဂိုကို နှစ်ပတ်အတွင်း ပြန်လည်ကြေငြာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရွေးချယ်ခံရသော လိုဂိုအတွက် ဆုကြေးငွေ (၇) သိန်းကျပ် တိတိ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ရှင်းလင်းသေသပ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ရမည်။
Vector Format (Illustrator or Corel Draw) ဖြစ်ရမည်။
အခြား မည်သည့် လိုဂိုနှင့်မျှ မတူပဲ ဒီဇိုင်းကွဲပြားရမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းလိုဂိုသည် ရတနာပုံတယ်လီပို့ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရမည်။
ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သာမက Print ထုတ်ရန်အတွက်လည်း အဆင်ပြေသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ရမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်လိုသူများသည် မိမိတို့ရေးဆွဲထားသော လိုဂိုများအား (Inforithm-Maze, 10th Fl, La Pyayt Wun Plaza, No. 37, Alanpya Pagoda Rd., Dagon Tsp 11191, Yangon) သို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။
လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ပေးပို့နိုင်သလို ၊ Online ဖြင့်လည်း ဤနေရာမှ ပေးပို့နိုင်ပါသည်
Posted by NLS at 5/12/2010 12:48:00 AM0comments Links to this post
ဗဆွေ၊ ဦး (နိင်ငံတှောဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
ဗတင်၊ သခင် (ရေနံမြေ)
ဗတင်၊ သခင် (လက်သီးပုန်း)
ဗမာတိုင်းလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်များ အစည်းအရုံး
ဗမာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ကွန်ဂရက်
ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး
ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသမီး အဖွဲ့ချုပ်
ဗမာပြည် အလုပ်သမား လယ်သမား ပာတီ
စိန်၊ ဦး (ဗနဿဓုလ)
ဇင်ယှော၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
တာရာ၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
ဗလ၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
မြင့်၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
ဘ၊ မောင်၊ ဆာ
ဘကြည်၊ ဦး (ပန်းချီ)
ဘခက်၊ ဦး (ရဲဘှော)
ဘဂျမ်း၊ ဦး (ပုဂံ)
ဘဆွေ၊ ဦး (ဘုန်းကြီးဘဆွေ)
ဘတင်၊ ဦး၊ ရွှေပြည်
ဘဌေး၊ ဦး (သီရိပျံချီ၊ သရေစည်သူ)
ဘမှော၊ ဒောက်တာ (နိုင်ငံတှောအဓိပတိဟောင်း)
ဘလက်ဒင်၊ အော့တို၊ ချားလ်၊ ဒောက်တာ
ဘလုံလေး၊ ဦး (ပန်းချီ)
ဘလှိုင်၊ ဦး (လွယ်အိတ်ကြီး)
ဘလှ၊ ဦး (မြောင်းမြ)
ဘသောင်း၊ ဗိုလ်မှူး (မောင်သုတ)
ဘသန်း၊ ဦး (ယူပီအိုင်)
ဘသန်း၊ ဦး (ရာဇဝင်)
ဘသန်း၊ ဦး (ရှင်မဟာဗုဒဿဓဃောသ)
ဘဦး၊ ဒောက်တာ (သမဿမတ)
ဘအေး၊ ဦး (ပြည်ထောင်စု ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်)
ဘုန်းမြင့်၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
ချစ်ပို၊ မ (သူရ)
မင်းညီမင်းသားများ ဘွဲ့ပေးပုံ အဆင့်အတန်း
မင်းမိဘုရားများကို ဘွဲ့ပေးပုံ အဆင့်အတန်း
မင်းရောင်၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
မောင်ကြီး၊ ဦး (လယ်တီပဏဿဍိတ)
မောင်စိန်၊ ဦး (ကာတွန်း)
မောင်မောင်၊ ဒောက်တာ (သမဿမတ)
မောင်မောင်ကြီး၊ တကဿကသိုလ် (မြန်မာစာပာမောကဿခ)
မောင်မောင်ခ၊ ဦး (ဝန်ကြီးချုပ်)
မောင်မောင်တင်၊ ဦး (မဟာဝိဇဿဇာ)
မောင်မောင်တင်၊ ဦး (K.S.M., A.T.M)
မောင်မောင်ဝင်း၊ ဦး (အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်)
ဝ၊ မောင်၊ သိပဿပံ
မောင့်ဘက်တန်၊ လော့ဒ်၊ လူဝီ
မနဿတလေးနန်းမြို့ ပန်းဟေဝန်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ မြန်မာ့သူရဲကောင်း ရုပ်တုများ
သဲ၊ မယ် (မြောက်နန်းမိဖုရား)
မြတ်ကျှော၊ ဦး (မြန်မာစာအဖွဲ့)
မြကျှော၊ ဦး (ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်)
မြစီ၊ ဒှော (ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ပာလီမန် အမတ်)
မြစိန်၊ ဦး (သံအမတ်ကြီးဟောင်း)
မြို့၊ ဆရာ၊ အဂဿဂမဟာပဏဿဍိတ
မြို့ဝန် (နိုင်ငံတှောအရပ်ရပ် မြို့ကျေးရွာများမှ မြို့ဝန်)
မြင့်သန်း၊ ဒှော (ကထိက)
မြင့်သိန်း၊ ဦး (အငြိမ်းစားနိုင်ငံတှော တရားဝန်ကြီးချုပ်)
မြန်မာ-ဂျာမနီ (၁၈၈၆) မဟာမိတ်စာချုပ်
ဂျာရမံနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ချုပ်ဆိုသည့် မဟာမိတ်စာချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း
မှူးတှောမတ်တှောများကို ဘွဲ့ပေးပုံ အတန်းအဆင့်
ရဋဿဌသာရ၊ မဟာ၊ ရှင်
ရန်နိုင်၊ ဗိုလ် (ရဲဘှောသုံးကျိပ်)
ရှော့တို၊ လီယိုနတ်၊ ဟာရီ
ရွှေတိဂုံ အလယ်ပစဿစယံ လူထုအစည်းအဝေး
ရွှေမြ၊ ဦး (သရေစည်သူ)
လုစ်၊ ဂျီ၊ အိပ်ခ်ျ
လွင်၊ ဦး (နိုင်ငံတှောကောင်စီဝင်)
လှ၊ ဦး (လူထု)
လှကြည်၊ ဒှော (သခင်မ)
လှကြည်၊ ဦး (မဏဿဍိုင်)
လှထွန်းဖြူ၊ ဦး (နိုင်ငံတှောကောင်စီဝင်)
လှမောင်၊ သခင် (စစ်ကိုင်း)
လှမောင်၊ ဦး (အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး)
လှရွှေ၊ ဦး (မနဿတလေးတကဿကသိုလ် အငြိမ်းစား ပာမောကဿခချုပ်)
လှအောင်၊ ဦး (ဗိုလ်မှူးကြီး)
ဝိစိတဿတသာရာဘိဝံသ၊ အရှင် (မင်းကွန်းဆရာတှောဘုရားကြီး)
ဝင်းမောင်၊ ဦး (မန်းဝင်းမောင်၊ သမဿမတ)
သာဂောင်၊ ဦး (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)
သီရိနဿဒာဘိဝံသ၊ အရှင် (တိပိဋကဓရ ဓမဿမဘဏဿဍာဂာရိက)
သီလဝံသ၊ မဟာ၊ ရှင်
သုမဂဿငလာလကဿငာရ၊ ဘဒဿဒနဿတ (တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ)
သောဘိတ၊ ဦး (ရွှေကိုင်းသား)
သောဘိတ၊ ဦး (မြင်းခြံဆရာတှောဘုရားကြီး)
သောင်း၊ ဦး (ရေဦး)
သောင်းတင်၊ ဦး (အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်)
သောင်းထိုက်၊ ဦး (ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း)
သန်းဆွေ၊ ဒှော (မြန်မာစာပာမောကဿခ)
သန်းမောင်၊ ဦး (မနဿတလေးသူရိယ)
သန်းအောင်၊ ဦး (ပညာရေးဝန်ကြီးဟောင်း)
သိန်းတင်၊ ဒှော (သခင်မကြီး)
သိန်းမောင်၊ သခင် (မီးတုတ်)
သုနဿဒရ၊ အရှင် (တိပိဋကဓရ ကောဝိဒ)
သိမ်း၊ ဦး (တိုးတက်ရေး)
သိမ်းမောင်၊ ဦး (သတင်းစာဆရာ)
သိမ်းမောင်၊ ဦး (တရားလွှတ်တှောဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း)
သွင်၊ ဦး၊ ဆာ
ဟိန်၊ ဆရာ (မြို့မ)
ဟိန်းစွန်း၊ ဦး (ကာတွန်း)
အမာ၊ ဒှော (လူထု)
ဣနဿဒပာလ၊ အရှင် (တိပိဋကဓရကောဝိဒ)
ဥကဿကဋဿဌ၊ ရှင် (တောင်တွင်းကြီးဆရာတှော)
ဧမောင်၊ ဦး (မြန်မာစာပာမောကဿခ)
အေးမောင်၊ ဗိုလ် (စာရေးဆရာ)
အေးမောင်၊ ဦး (စာပေဗိမာန်)
အက်စ်ဂျေခင်၊ သူရ၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး (ငြိမ်း)
ဥကဿကံဝံသမာလာ၊ ရှင် (အုဂ်ဖိုရ်ဆရာတှော)
အောင်ဆင့်၊ ဦး (နိုင်ငံတှောကောင်စီဝင်)
အောင်သန်း၊ ဦး (ဗိုလ်ချုပ်အစ်ကို)
အုန်း၊ ဒှော (အမ်အေ)
အုန်းခင်၊ ဦး (မိုးကြိုး)
အုန်းမောင်၊ ဦး (ဂနဿဓမာ)
အုန်းမြင့်၊ ဦး (ဒို့ရှမ်းပြည်)
ဒီစာအုပ်ကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် ဒာလေးကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ပာ။
အနှစ်ချုပ် မြန်မာ့သမိုင်း အဘိဓာန် (၁) သန်းဝင်းလှိုင် ဘာလဲဘယ်လဲ
Posted by NLS at 5/05/2010 12:08:00 AM4comments Links to this post
Alphabetum Barmanum: The First Burmese Printed Alp...